အမှောင်တွင်းက လွတ်ကင်းအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » အမှောင်တွင်းက လွတ်ကင်းအောင်
Posted by naywoon ni on Mar 23, 2013 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 12 comments
အောင်မြတ်လေးးးးး ဟိုနဲ့က ရုတ်ရုတ် ဒီနားက ဆူဆူညံနဲ့ ကြားရနားဝက မသက်သာပါလား ဟရို့……….။ တစ်ခုက မှလည်း စိတ်ချမ်းသာစရာမတွေ့ရ တွေ့နေမြင်နေ ကြားနေရသမျှကတော့ တော်တော်လေး စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတော့တာပဲ….။
ပြဿနာစစ် အရင်းမြေက တဲ့ …..။ မျိုးစေ့မမှန် ပင်မသန် တဲ့….။ မျိုးစေ့မှန်တော့လည်း မြေမှမကောင်းရင် ဘယ်လိုလုပ် အပင်က သန်နိုင်မှာတဲ့လဲ …..။
ဒါဟာ တိုင်းပြည်ကို အမှောင်ချခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်တွေပေါ့….။ တစ်ဖက်နားဖောက် တစ်တစ်ဘက်မြင် ပြီးတော့ပညာရေးမှာလည်း လိုချင်သလောက်ပဲ တတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တာရယ် မလိုချင်တဲ့သတင်းနဲ့နည်းပညာတွေ ပိတ်ပင်ခဲ့တာရယ် အားလုံး ဆိုးကျိုးတွေ တွေ့ရတော့တာပေါ့ ….။ ပြည်သူတော်တော်များများက အရင်က ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်မှမရဘူး အားလုံးအပိတ်ပင်ခံထားရတယ်….။ ဆင်းရဲတယ် ကျပ်တည်းစွာနေထိုင်စားသောက်ရတယ်…။ ပွင့်လင်းလာချိန်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အတန်အသင့်ပေးလာချိန်မှာ ဘာမှမလုပ်ကိုင်နိုင်ဘူး….။ လုပ်စရာအရင်းအနှီး အတတ်ပညာမရှိဘူး အမှောင်က လွတ်မြောက်စ အလင်းရောင်းဒဏ်မခံနိုင်သေးဘူး…။ အဲဒိအချိန်မှာ ဒီတိုင်းပြည်ထဲကို ဘယ်အချိန်က ၀င်လာမှန်းမသိတဲ့ ဒီတိုင်းရင်းသားလို့ သတ်မှတ်မခံရတဲ့သူတွေ ဒီနိုင်ငံသားလို့ အသိအမှတ်မပြုနိုင်သေးတဲ့သူတွေက စီးပွားရေးတွေ လှိမ့်ပြီးလုပ်နိုင်တယ် ….။ ကမ္ပဏီ တွေ ထောင်လာတယ်…။ အမှောင်ထဲမှာနေလာရတဲ့သူတွေက အဲဒိမှာအခစားသွားလုပ်ရတယ်…။ ဈေးဆိုင်တွေ စတိုးဆိုင်တွေကြည့်လည်းဒီလိုပဲ အမှောင်လောကမှာနေသားကျလာတဲ့သူတွေက စမ်းတစ်ဝါးဝါး ဖြစ်နေချိန်မှာ နိုင်ငံသား မဟုတ်သူတွေလို့ယူဆထားတဲ့သူတွေက ကြီးစိုးနေတာ ….။ ဟိုဂဏန်း ဒီဂဏန်းတွေ ပေါ်လာတာလည်း ဒီဂယက်ကနေစတာပဲ…။ ဟိုမှာမ၀ယ်ရဘူး ဒီမှာဝယ် ဆိုတာမျိုး သူတို့ရဲ့ အတွေးက ဒီမှာ စီးပွားရေးလုပ်လို့မရရင်ပြန်သွားကြမှာပဲလို့ယူဆပြီးလုပ်ကြတာ အဲဒါအမှောင်ချထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေရဲ့ ပညာမဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ချို့တစ်ဝက်ပါပဲ….။ နှစ်ငါးဆယ်ကျော် အမှောင်ချခံထားရတာဆိုတော့ မျိုးဆက်နှစ်ဆက်ကျော်လောက် ဒီအတွေး ၀င်နေတယ်….။ ဒါကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်…။ ပြုပြင်ပေးရာမှာလည်း ပညာပေးသက်သက် တင်မဟုတ်ပဲနဲ့ အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းတွေထွန်းကားအောင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်ငန်းရှင်လေးတွေပေါ်လာအောင် သင်တန်းတွေပေး ငွေကြေးအထောက်အပံ့အဖြစ် ချေးငှားပေးတာမျိုးတွေနဲ့ အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ပေးရမှာပါ….။ စီးပွားရေး အနေနဲ့ အားလုံးကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်အောင် လယ်ဗယ်ညှိပေးရမှာပါ…။ အဲဒိလိုအခြေခံ အချက်အလက်တွေညီနေအောင်လုပ်မပေးနိုင်ရင် ဒီအစွဲအလမ်းတွေက ပျောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး…။ လူတွေ လူတွေ နေ့စဉ် တရားစာတွေရွတ် မေတ္တာတွေပို့ နဲ့ ဘာမှမဖြစ်ခင်ကတော့တော်တော်လေး ဟုတ်နေတာပဲ ….။ဟော…. ပြဿနာလည်းဖြစ်လာရော ရွတ်ထားတဲ့ဘုရားစာတွေမေ့ ပို့ထားတဲ့မေတ္တာတွေလည်း ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းမသိတော့…..။ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ပါလေရောလား …..။ ပျောက်မှာပေါ့ ….။ နေ့တိုင်းပါးစပ် သစ်ခေါင်းလိုက်အောင်ရွတ်နေတဲ့ ပါဠိ ပါတ်သားတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သေချာမသိ သိပေသော်ငြား မကျင့်ကြံ ….။ ကျန်အချိန်တွေမှာ တစ်ငါ ..ငါ နဲ့ ငါတွေကသာမင်းမူ နေလေတော့………။ တစ်ကယ်တော့ ဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတွေက လက်တွေ့လုပ်ဖို့ နှုတ်တိုက်ရွတ်ပြီး ဒါတွေငါရွတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး စိတ်ကြီးဝင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး ….။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတဲ့သူ တော်တော်များများက ဘာသာရေးဆိုရင် ရပ်ကွက်ထဲလှည့်ပြီး အလှုခံတာလောက် မနက်ဆွမ်းလောင်းတာလောက်နဲ့ တင်းတိမ်နေတာ …။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေကျတော့လည်း သူတို့ ကြိုက်တဲ့ ၀ါဒဖြန့် ဆရာတော်လောက်ပင့်ဖိတ် တရားပွဲလုပ် ဒါကိုဂုဏ်ယူ နေတတ်တာ …..။ ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံဖို့ အာရုံစိုက်တာမဟုတ်ဘူး အဲဒိမှာ အမှားကြီးမှားကုန်တာပဲ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ငါတို့ဘာသာလာမထိနဲ့ မီးပွင့်သွားမယ် ဆိုတာချည့်ပဲ ကိုယ့်ခံတပ်စည်းလုံအောင်ချမထားရင် ထိလို့ရထိမှာပဲ ဖောက်လို့ရရင်ဖောက်မှာပဲ တစ်ကယ်က လက်တွေ့က ကိုယ့်စည်းကိုယ်လုံအောင်ကာရမှာ အဲဒိမှာလည်း သူတစ်ပါးကို သွားပြီး ပုတ်ခတ်ဖို့မလိုပဲ ထိပါးစောင်းချိတ်ပြီးမဟုတ်ပဲ ကာရမှာ ဒါက ဘာသာရေးကဏ္ဍ ကျန်တာတွေနဲ့မရောထွေးမိဖို့ သတိနဲ့ ကိုင်တွယ်ရမှာ …။ ဟိုတစ်လောက တက်လာတဲ့ ဂဏန်းသုံးလုံး ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာတော့တက်ဦးတော့မှာပဲ တွေးလိုက်မိသား မကြားပါဘူး ဖြစ်လာတာပဲ…။ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်ကာလမှာ အဲဒိလို လုပ်လို့မရပါဘူး …။ ကိုယ့်ဘက်က လွတ်လပ်သလို ဟိုတစ်ဖက်ကလည်း လွတ်လပ်မှုရှိနေတာပဲ ……။ အဲဒိတော့ သူတို့ ဟောပြောနေသမျှက ဟိုတစ်ဘက်သားကို ရန်စ နေသလိုဖြစ်နေတာ မတွေးမိတာလား …..။ ကိုယ့်စည်းရိုးကိုလုံဖို့ပဲ အာရုံထားပြီး သတိမမူမိတာလား ဘာလားကတော့ ဆော်သြနေကြသူတွေမှသိမှာပဲ….။ ဟော ဖြစ်ရပြန်ပြီ ပြဿနာတက်နေတုန်းက ဘယ်နားအိပ်နေမှန်းမသိတဲ့သူတွေ ခု ပြဿနာလည်း ငြိမ်ရော ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အလှူခံပါတယ် ဖြစ်ရပြန်ရော……….။ ရွာသားကောင်းမှု သူကြီးအလှူနဲ့ ဘယ်တုန်းက တို့အဖွဲက ဘယ်လိုလှူခဲ့တာလုပ်ဦးမယ်….။ တစ်ကယ်စေတနာရှိရင် ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ကိုယ့် ကိုယ်ခန္ဓာ က ချွေးနဲ့ ရလာတဲ့လုပ်အားက ကိုယ်ဥာဏနဲ့ ရလာတဲ့ လုပ်အားခ အကုန်စွန့်ပြီးလှူလိုက်ပါ့လား ….။ ရှေးဘုရင်တွေထုံး နှလုံးမူပြီး တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့လုပ်အားနဲ့ ဘုရားတည်ပြီး ဘုရားဒယာကာခံယူတဲ့ ဓလေ့ ဆက်သုံးနေရင်တော့ မြန်မာပြည်ကြီး ပဒေသရာဇ် ခေတ်က ရှေ့ဆက်တက်လို့ရမှာမဟုတ်ပေဘူး …..။ ကိုယ်လုပ်နေတာ အကောင်းထင်နေကြသူများ စဉ်းစားပါ လေ့လာပါ ဆန်းစစ်ပါ….။ အမှန်ကိုသိပေမဲ့ ပြောခွင့်မသာလို့ ပြောလိုက်ရင်လည်း အကျိုးမရှိလို့ မပြောခဲ့တဲ့သူတွေ အနားမှာတင်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သတိလေးတော့ထားသင့်ပါတယ်…။ အရာရာပြောင်းလဲနေပါပြီ….။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်က အတွေးမျိုး လုပ်ရပ်မျိုးနဲ့ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်ကြပါ….။ မိတ္ထီလာ ပြဿနာက ဘာသာရေးနဲ့ လူမှုရေး ခွဲခြားမတွေးလို့ ဖြစ်ရတာပါ….။ ပြီးတော့လူမျိုးရေး နောက်လည်းလာဦးမှာပဲ….။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ လုပ်ငန်း တွေက ကွာနေတယ် ….။ အဓိကက ပညာ ကွာနေတယ်…။ အဲဒိပညာကို လယ်ဗယ် ညှိပေးနိုင်မှ….။ ငွေကြေးအရင်းအနှီးက လည်း ထုတ်ချေးပေးမဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေများလာပါမှ….။ အဲဒလိုလုပ်ပေးရာမှာလည်း အစိုးရနဲ့ ပါတီတွေကမလုပ်ပဲ ကြားခံ အဖွဲ့အစည်းတွေထားပြီး ကိုယ်ကျိုးစွန့်လုပ်ကိုင်ပေးဖို့လိုတယ်…။ အစိုးရနဲ့ ပါတီတွေက ဘေးကနေ ၀ိုင်းရံပေးမယ်ဆိုရင် မျိုးဆက်နှစ်ဆက်လောက်အမှောင်ထဲကျနေခဲ့တဲ့ ပညာရေး နဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ဘာသာရေး အယူသည်းမှုတွေ နည်းသွားနိုင်ပါတယ်…။ ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ကတော့ ဆက်ပြီးတွေးနေဖို့ကို မကောင်းတော့ဘူး …………။
မိတ္ထီအဖြစ်အပျက်မှာ အတော်ပျက်စီးသွား တာပါလားဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျ။
ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုလို့ အဆောက်အဦးအိမ်ယာတွေလို့ ပြေးမမြင်လိုက်နဲ့ ကိုနေဝင်းနီရေ။
ကျနော်ပြောတဲ့ပျက်စီသွားကြတာက စိတ်ဓာတ် ခံယူမှု့တွေပါဗျာ။
ဦးနေဝနိးနီရဲ့  သဘောထားနဲ့ အတွေးကို အပြည့် အဝထောက်ခံပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်းဒါမျိုးပြောချင်ပေမယ့် မျက်ကန်းမျိုးချစ်များဆဲမှာကြောက်လို့ 
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ညစ်တွန်း တွန်းတဲ့ အကျင့်က
တစ်ခုခု မကျေလည်ရင် နိုင်ရာကိုရန်ရှာတတ်တာနဲ့  ငတ်ရင်လုမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားတွေက
ခေတ်အဆက်ဆက် အမွေခံနေပါတယ် ။
ဒါမျိုးကို လက်မခံကြောင်းပြရပါမယ် ။
လူ ဟာလူပဲလို့ နားလည်တတ်ရပါမယ်။
ဘုရားသာ သက်တော်ထင်ရှားရှိရင် ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲ ….
အမြင်ကျယ်အောင် မျက်စိဖွင့် ပညာပေးဖို့ အရေးတကြီးလိုနေပါပြီ။
ရှေးဘုရင်တွေထုံး နှလုံးမူပြီး တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့လုပ်အားနဲ့ ဘုရားတည်ပြီး ဘုရားဒယာကာခံယူတဲ့ ဓလေ့ ဆက်သုံးနေရင်တော့ မြန်မာပြည်ကြီး ပဒေသရာဇ် ခေတ်က ရှေ့ဆက်တက်လို့ရမှာမဟုတ်ပေဘူး …]
အခြေခံပညာရေးမှာ.. “ဘက”ပညာရေးနဲ့ဆို ..ပိုသာဆိုးတဲ့.. ကွန်ဆာဗေးတစ်တို့ရဲ့.. ရှေးစွန်းစွဲ.. အနာဂတ်မြင်ရမယ်လို့.. အရင်ကလည်းရေးအခုလည်းရေးနေပါတယ်..
လူထုက.. (တခြားရွေးချယ်စရာမရှိလို့ဆိုပြီး).. ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကြားရေးကို.. မလုပ်..မကူသင့်ပါဘူး..။
ရဟန်းတွေကို.. ကလေးပညာရေးအတွက်စာသင်ကျောင်းကြီးကြပ်ခိုင်းတာဟာ.. ၀ိနည်းနဲ့လည်းမညီပါဘူး.
ရဟန်းက.. နို့ဗူးဖျော်..။ ငွေတွေစီမံကြီးကြပ်..။ ကလေးတွေ.. မိသားစုတွေအရေးစီမံခန့်ခွဲ..။ လူမှုရေးတွေကို ၀င်ပါ..။ သင့်လည်းမသင့်လျှော်ပါဘူး..။
ဘုန်းကြီးကျောင်းသားခေတ်ကို.. ထားရစ်ခဲ့သင့်ပါပြီ..။ ဘုန်းကြီကျောင်းသားတွေဟာ.. ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေ ဖြစ်နေပြီး.. လွယ်လွယ်နဲ့.. သူတို့အတွေးအခေါ်တွေ.. အစွန်းရောက်သွားနိုင်လို့ပါပဲ..။
အစိုးရကိုသာ ကလေးကျောင်းတွေ ဖွင့်ပေးဖို့…။ ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမှီအောင်လုပ်ပေးဖို့..။ ပညာရေးအတွက်ဘက်ဂျက်ကို.. များများချပေးဖို့.. ဖိအားဝိုင်းပေးသင့်တာပါ..။
ကလေးသူငယ်တွေကို.. စနစ်တကျပြုပြင်သင်ကြားနိုင်တဲ့.. ပရိုဆရာဆရာမ..
အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့.. ကျောင်းအုပ်(ကြီးကြပ်သူ) တွေ.. ပရိုဖြစ်ရမှာပါ..။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်.. မြန်မာပြည်ကြီး.. ရှေးစွန်းစွဲတို့ရဲ့.. ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကြီးထဲ.. ကျန်ရစ်ခဲ့မှာပါပဲ..။
ဒါကျက် …. ဒါဖြေ …..
စကားဆို လေလိုတောင် မဟနဲ့
ဟ လိုက်တာနဲ့ စိပလိုက်မလေ …
ဒီလို အမှောင်တွေ ကြားမှာပဲ …
ကိုယ့်ရဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး မြှုပ်နှံလာခဲ့ရလေတော့ …
အခု ဘဘကြီး ပြောသလိုပေါ့ ……
ထောက်ခံပါတယ်။ အခြေခံမူလတန်း ပညာရေးကစပြီးပြင်ရမှာပါ
အခုကတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူးသဂျီးရေ… အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က မူလတန်းဆရာ၊ဆရာမတွေ ဆိုရင်
ခပ်ညံ့ညံ့နဲ့တင်ရတယ် လို့ ယူဆပြီးလုပ်နေတာ..နယ်စွန်နယ်ဖြားတွေမှာဆိုရင်
နောက်တစ်ချက်က ဆရာ၊ဆရာမတွေကိုယ်တိုင်က မူလတန်းပြဆိုရင်
တကယ်က မိဘပြီးရင် ပထမလက်ဦးဆရာတွေဖြစ်တဲ့ မူကြိုနဲ့ မူလတန်း
နိုင်ငံခြားက စပါယ်ရှယ်လစ်တွေငှားပြီး မူလတန်းဆရာ၊ဆရာမတွေ ကို
စီးပွါးရေး၊ တို့ ကြောင့် နှစ်ရှည်ကြာ ချွတ်ချုံကျနေတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာတွေကရော ပြန်လည် ကောင်းမွန်ဖို့ အချိန် ဘယ်နှစ်နှစ် ယူရမတုန်းမသိ။
ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ နဲ့ လူမှုရေး ရောထွေးချက်များတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာကို ဘယ်လိုရှင်းမလဲမသိ။
ကိုယ့်မှာ ဘေးနားက လူတစ်ယောက်ကိုတောင် နေ့တိုင်း ငြင်းခုံသတ်ပုတ်ပြီး ရှင်းပြနေရတာ။
( တစ်ကယ်တော့ ဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတွေက လက်တွေ့လုပ်ဖို့ နှုတ်တိုက်ရွတ်ပြီး ဒါတွေငါရွတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး စိတ်ကြီးဝင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး ….။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတဲ့သူ တော်တော်များများက ဘာသာရေးဆိုရင် ရပ်ကွက်ထဲလှည့်ပြီး အလှုခံတာလောက် မနက်ဆွမ်းလောင်းတာလောက်နဲ့ တင်းတိမ်နေတာ …။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေကျတော့လည်း သူတို့ ကြိုက်တဲ့ ၀ါဒဖြန့် ဆရာတော်လောက်ပင့်ဖိတ် တရားပွဲလုပ် ဒါကိုဂုဏ်ယူ နေတတ်တာ …..။ ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံဖို့ အာရုံစိုက်တာမဟုတ်ဘူး အဲဒိမှာ အမှားကြီးမှားကုန်တာပဲ )
အဲဒီစာသားတွေကို ကြိုက်သဗျာ ၊
တကယ်လည်း မှန်ပါရဲ့ ၊ ကျေးဇူးပါကိုနေဝန်းနီရေ . . . . .
အရက်ဆိုင် ဘီယာဆိုင်ထိုင်မိတာနဲ့ လူယုတ်မာ မဟုတ်သလို
ဓမ္မာရုံမှာ ထိုင်နေတိုင်းလည်း သူတော်ကောင်းလို့ မဆိုသာသေးပါဘူး
ဒီပို့စ်နဲ့ မဆိုင်ပေမယ့် ပြောချင်တာလေး ပေါ်လာလို့ ပြောမိတာပါနော့
ဘာသာ၊ဂိုဏ်းဂဏသည် ငြိမ်းအေးမှုကို မဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ဘူး၊ အစတော့ ဟုတ်သလိုနဲ့ ညီညွတ်မှု ဖြစ်စေတယ်၊ ပွိုင့်တခုလည်း ရောက်ရော အဲဒီအစုအဖွဲ့ခြင်းခြင်း ဖိုက်တော့တာပဲ။ ကိုယ်မလုပ်လည်း သူများကလုပ်၊ ကိုယ်ကပြန်လုပ် ဒါနဲ့ ပူလောင်ကုန်ရော။ ဓမ္မကသာလျင် ငြိမ်းဧမှုအစစ် ဖြစ်စေတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို တကိုယ်ရည် လွတ်မြောက်မှု ရည်သန်တယ် ပြောတာ။ မိုက်မဲသူ (ဥမပါ သဂျီးဦးစ်ခိုင်) များကတော့ တကိုယ်ဂေါင်းဆန်တယ် အဓိပါယ်မဲ့တယ် စွပ်စွဲဂျသပေါ့။ တကယ့်ဓမ္မအစစ်က သီးသန့်လေး.. ဘယ်သူနဲ့မှ မရောဘူး။ ဂေါတမမြတ်စွာတောင် ဘုရားဖြစ်ပီးပီးခြင်း ငါ့တရားဟောလည်း ဒင်းတို့ သိမှာမဟုတ်လို့ ညည်းတွားမိသေးတယ် မဟုတ်လား။ တကယ်လည်း ဓမ္မသဘော လိုက်နာသူက လက်တဆုပ်စာ.. ကျန်တာတွေက ဘာသာဂိုဏ်းဖွဲ့ ကုန်ကြတာပဲ။ အကျိုးမဲ့တော့ မဟုတ်၊ ကံကုသိုလ်တော့ ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ.. သို့ပေမဲ့ ဘုရားထားခဲ့တဲ့ ဓမ္မလမ်းကြောင်း မမည်တာကို ပြောတာ။ စွတ်လုပ်ရင်း ထင်သလို ဖြစ်မလာတော့ ဘယ်မှာလဲ နတ်သိကြား သာသနာစောင့်နတ် ဘာညာ ပြောကြတယ်။ ရိုးရိုးလေးပဲ စဉ်းစားကြည့်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ပြီး ဓမ္မနဲ့ ကင်းကွာသူနဲ့ ဘာသာခြားဖြစ်ပီး သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သူ နှစ်ဖက်ပြသနာဖြစ်လို့ နတ်ကဝင်ကယ်မယ် ထင်လား။ ကျုပ်တော့ ထင်ပေါင်၊ နင့်ထိုက်နဲ့နင့်ကံ ပစ်ထားမှာပေါ့၊ ပဌာန်းဆက် ရှိရင်တော့ မပြောတတ်။ ကျန်တာတော့ ညဖက်အိပ်ကောင်းတုန်း ကြောင်နှစ်ကောင် ဖိုက်တာ အချိန်ကုန်ခံ ရေပက်သူ ဖျန်ဖြေပေးသူ အတော်ရှားမယ်။